घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू टर्की फुटबल खेलाडीहरू ओजान काबाक बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
ओजान काबाकको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा हामी तपाईलाई अन्काराको टर्की फुटबलरको संक्षिप्त इतिहास दिन्छौं। Lifebogger आफ्नो कथा शुरू देखि शुरू देखि, जब उहाँ प्रसिद्ध भयो। तपाईंलाई ओजान काबाक बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवनको चित्रण सारांश छ।
ओजान काबाकको जीवनी। उहाँको बाल्यकालदेखि फेमका पलहरू सम्म।
यदि तपाईं सचेत हुनुहुन्न भने, उहाँ युरोपको सबैभन्दा रोमाञ्चकारी प्रतिभा हो। ESPN को सूचीमा एक फुटबलर सोकरका best 36 सर्वश्रेष्ठ खेलाडी २१ बर्ष वा मुनिका उमेरहरूलाई। यस सम्मानको बावजुद, ओजन कबाकको जीवन कहानीसँग केवल थोरै फ्यानहरू परिचित छन्। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
ओजान काबाक बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ - ओजवाल। ओजान मुहम्मद काबक मार्च २००० को २ 25 औं दिनमा उनका बुबा, जेल निर्देशक, र आमा, घरका निर्माता, टर्कीको राजधानी अन्कारामा जन्मेका थिए।
टर्की प्रोफेशनल फुटबलर पहिलो छोरा र दोस्रो बच्चाको रूपमा संसारमा आए, उनको तीन आमा मध्ये एक आमा र उनका आमा बुबाको मिलनमा जन्मेका तीन छोरा मध्ये हामीले यहाँ चित्रण गरेका छौं।
ओजान काबाकका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्। के तपाई फुटबलर को जस्तो देखिन्छ भन्न सक्नुहुन्छ?
सेन्टर-ब्याकले आफ्नो जेठो बहिनी र कान्छो भाईको साथमा आफ्नो बाल्यावस्थाको वर्षहरू रमाईलो गर्‍यो जो इम्ले नामबाट जान्छन्। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, Emre पनि फुटबल मा छ र ओजान जस्तै हुन चाहान्छ। सानो उमेरको भिन्नताले दुबै भाइहरूलाई अलग गर्दछ र हामी शर्त लगाउँछौं, कि तपाईंलाई ओजन र एमरे बीचको भिन्नता बताउन गाह्रो छ।
ओजान काबाकको परिवार। ऊ आफ्नो जेठी बहिनी र कान्छो भाइ, Emre सँगै हुर्किएको थियो।
दोस्रो, हुर्कदै गरेको अन्तराल, के तपाईंलाई थाहा छ कि ओजवालको घुमन्ते बाल्यावस्था थियो? हो!… वास्तवमा, उहाँ जेल निर्देशकको रूपमा आफ्नो बुबाको जागिरको कारण धेरै टर्कीका शहरहरूमा हुर्कनुभयो।
आन्दोलनहरूको बीचमा, युवाले फुटबल हेर्न र अभ्यास गर्ने प्रगाढ प्रेम विकास गरे। त्यतिखेर ओजान लिभरपूलको कट्टर समर्थक थिए किनभने उसलाई तिनीहरूको रातो रंग मनपर्दछ। उनका दुई फुटबल मूर्तिहरू - स्टीफन जेरार्ड र लुइस Suarez - सँधै उसलाई तिनीहरूको खेल देखेर आनन्द दिन्छ।
ओजान काबाक परिवार पृष्ठभूमि:
हुर्कदै, जीवनमा तीन निश्चितताहरू हुन्छन् - नम्र, खुसी वा रूख हुर्काउने। काबाकको बाल्यकाल खुशी थियो र उनका आमा-बुबाले उनलाई नम्रतामा हुर्काए। उसको रमाइलो पालनपोषण केही हदसम्म यस तथ्यसँग सम्बन्धित छ कि उनका बुबा, जेल निर्देशक धनी छन्। नबिर्सनुहोस्, ऊ फुटबल उत्साही परिवारबाट आएको हो।
ओजान काबाक परिवार मूल:
टर्कीको यो नक्शा ओजान काबाक परिवार मूल वर्णन गर्दछ।
अन्कारा मूल निवासी एक तुर्की राष्ट्रिय हो। उनको परिवारको झुकाव निर्धारण गर्न गरिएको गहन अनुसन्धानबाट नतिजा ओजानले एशियाली र युरोपियन दुबै जरा रहेको संकेत गर्दछ। खैर, हामी त्यो आश्चर्यजनक भेट्दैनौं किनभने टर्कीले एशिया र युरोपलाई परास्त गर्छ।
ओजान काबाक शिक्षा:
टर्कीका धेरै बच्चाहरू जस्तै, उनका आमा-बुबाले उनलाई प्राथमिक शिक्षा दिएका थिए। माध्यमिक विद्यालयमा जानु भनेको अलि चुनौतीको थियो किनकि फुटबल र उसको पुस्तकहरू बीचको मल्टिटास्कको आवश्यकता पर्‍यो। यसको बाबजुद पनि, हाम्रो केटाले इस्टानबुलमा विज्ञान हाईस्कूलको पुरस्कार जितेर सम्मानका साथ स्नातक गरे।
ओजान काबाक फुटबल कहानी:
इन्टरनेट रोकिरहेको व्यापक गलत सूचनाको विपरित, फुटबलमा ओजवलको यात्रा गलातासारायबाट सुरु भएन। वास्तवमा भन्ने हो भने, उनले स्ट्राइकरको रूपमा सिलिभ्रिस्पोरसँग खेलमा पहिलो कदम चाले।
ओजान काबाकले युवावस्थामा थकाउने प्रक्रिया पार गरे। उनले शिक्षाको बारेमा धेरै फुटबल खेल्ने चाहना राखेका थिए। हाम्रो केटाले यी कठिन समयमा फुटबलर बन्ने कुरा त्याग्यो। धन्यबाद उसको आमा बुबा र क्लब उसलाई समर्थन गर्नुभयो।
क्यारियर फुटबलमा प्रारम्भिक जीवन:
जब काबक १२ बर्षको थियो, उनी गलातसारायमा परीक्षणको लागि गए र यसमा सफल भए। यसरी क्लबमा उनको यात्रा सुरु भयो जहाँ उनीहरूले स्ट्राइकरबाट डिफेन्डरमा उनको रूपान्तरण देखेका थिए। रूपान्तरण पछि कारण दिदै, एकेडेमी कोच नेडिम Yigit टिप्पणी कि:
“उसको चलिरहेको शैली थियो जसले विपक्षीहरूलाई डरायो। वास्तवमा, प्रत्येक चोटि ओजानले बल पाए, उनी यससँग दगुर्छन् र रक्षा गर्छन्।
त्यसकारण हामीले निर्णय गरे कि ऊ पूर्ण ब्याक हुनुपर्छ किनकि उसले बलको ख्याल राख्यो र राम्रोसँग अगाडि बढायो। ”
सुरुमा, युवा कबाक परिवर्तनसँग खुसी थिएनन्। यद्यपि उनी यसमा अनुकूल छिटो थिए। धन्यबाद, उहाँ क्लबको एकेडेमीमा कुनै समस्या बिना उठ्नुभयो।
क्लबसँगको आफ्नो प्रारम्भिक जीवनको दौडान ओजान काबाकका अभिभावकले उनीहरूको छोरालाई निजी हाई स्कूलमा भर्ना गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर उसलाई त्यो मन परेन। अन्तमा उनीहरूले उनकोलागि गलातसारायका साथ एक बन्ने बन्ने प्रस्ताव गरे।
क्लबको प्रशिक्षण मैदानमा आफ्नो जीवन बिताउँदा जवानले सिक्न धेरै पाए र आफ्नो परिपक्वता बढाए। माध्यमिक स्कुलिंग चाँडै नै भूत बन्यो र ओजानले आफ्नो सबै समय फुटबलको सामना गर्न प्रयोग गरे - त्यो एक मात्र काम। जब उसले यो सम्मान समात्यो, प्रायः सबैलाई थाहा थियो कि ऊ पक्कै पनि जीवनमा सफल हुनेछ।
ओजान काबाक प्रारम्भिक क्यारियर सफलता।
उसको देशले २०१ U यूईएफए यूरोपीय अण्डर १ Champion च्याम्पियनशिपको लागि छनौट गर्दा ओजनलाई प्रख्यात राष्ट्रिय मान्यता दिइयो - यद्यपि सानो स्तरमा।
यस युविकाले टर्कीलाई टूर्नामेन्टको अन्तिम चारमा पुग्न मद्दत पुर्‍यायो जहाँ उसले प्रतिभा जस्ता मैदानमा चर्यो Emile स्मिथ रोवेम्यान सहर फिल फडन, चेल्सीको क्यालम हडसन ओडोइ र डार्टमन्डको Jadon Sancho। दुःखको कुरा, उनको टोली इटालीले हटाईयो।
ओजान काबाक जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
आफ्नो एकेडेमी वर्ष को अन्ततिर, काबाक एकदम पातलो देखि टाढा थिएन। यसको प्रतिक्रियामा, क्लबको व्यवस्थापनले उनलाई जिममा हिर्काउने जिम्मेवारी दियो। त्यसले उसलाई वरिष्ठताका लागि तयार पार्छ जुन उसले वरिष्ठ फुटबलमा सामना गर्ने छ।
एकेडेमीबाट स्नातक हुनु अघि, उदाउँदो ताराले कसरी विनम्र रहनको लागि निर्देशन गर्ने वरिष्ठ खेलाडीहरूसँग बाँड गर्‍यो। साथै, वरिष्ठ फुटबलको सफल सुरुवात भएको रहस्य।
जब ओजवालले अन्ततः गलातासारायसँग पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, यो कुरा स्पष्ट भयो कि उनीसँग अर्को रेटेड युवा डिफेन्डर बन्ने संभावना छ।
भाग्यको रूपमा यो हुनेछ, उनले सफ्ट स्लेटमा वरिष्ठ क्यारियर जीवन शुरू गरे। ओजानले आफ्नो व्यावसायिक पदार्पण गरे १२ मि २०१ on मा प्रतिद्वन्द्वी, येनी मालत्यासपोरलाई २-० सुपर लिगमा हराएर आफ्नो टीमलाई सहयोग पुर्‍याउँदै।
आफ्नो बाटोमा स्ट्याक गरिएका सबै समस्याहरू पिटेर, उनले विपक्षी स्ट्राइकरहरूलाई वार्ड गरेर सबै प्रेसरहरू सम्हाल्यो। ओजानले मनपराउने बिरूद्ध खेले इमानुएल एडबेयरे र Beşiktaş हिट मान्छे - एन्डरसन तालिका। त्यतिखेर, यी मानिस टर्की फुटबलमा सबैभन्दा ठूला स्ट्राइकरहरू थिए।
संग बाफेतिम्बी गोमिस उनको टोलीमा, उनीहरूलाई गोलहरू पुर्‍याउन मद्दत गर्दै, कबाकले आफ्नो रक्षाको संरक्षण प्रदान गर्न सामान्य भूमिका खेल्थे। सँगै, उनको सम्पूर्ण सिंह टीम प्रतिष्ठित २०१//१। Süper Lig खिताब जित्न सफल भयो।
जीत पछि, यो एक सही साझेदार गर्न कि तुर्की संघ को स्पष्ट भयो Ğağlar Söyüncü (एक टर्की रक्षात्मक स्टार) आइपुगेका थिए। ओजान काबाक परिवारको खुसीको लागि, उनीहरूको एक जनाले टर्की राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्न फोन गरे।
ओजान काबाक बायो - ख्याति कथा माथि उठ्नुहोस्:
तुर्की लिगको तुलनात्मक रूपमा कलिलो उमेरमा धेरै हासिल गरेपछि कमाण्डि and र टेक्निकल रूपमा प्रतिभाशाली डिफेन्डरले युरोपमा आफ्नो आँखा राख्न थाले। काबाकले आफ्नो प्यारेन्ट क्लब गलाटासरायलाई VfB स्टुटगार्टको लागि छोडे। त्यहाँ, उनले क्लब सुदृढ हुन नपरोस भनेर सुनिश्चित गर्नमा राम्रो काम गरे।
चाखलाग्दो कुरा के हो भने, VfB सँगै यो उदाउँदो ताराले एकल बुन्डस्लिगा खेलमा दुई पटक गोल गर्ने टर्की कान्छो र तेस्रो कान्छो स्टटगार्ट खेलाडीको रूपमा रेकर्ड पुस्तकहरूमा प्रवेश गरे। त्यो लक्ष्यको साथ, धेरै उदात्त प्रदर्शन सहित, उसले २०१/2018/२०१ Se सिजनको बुन्देस्लिगा रुकी जित्यो।
ओजान काबाकले VfB स्टटगार्टको साथ खुशीको जीवनको आनन्द उठाए।
अवलोकन गर्दै कि उनी द्रुत रूपमा विश्वको सब भन्दा द्रुत उर्जा दिने डिफेन्डर बनिरहेका थिए, श्ल्केले एक अवसर लिए। उनीहरूले उनको रिहाइको धारा सक्रिय गर्‍यो। के तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ?… श्ल्के खराबबाट झन् झन् खराब हुँदै गयो आफ्नो आगमन हुनु अघि र त्यहाँ छँदा, काबाकले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न मद्दत गर्‍यो - बिना कुनै कष्ट भोगी।
सत्य भन्न सकिन्छ, ओजान काबाक रोयल ब्लूजको लागि चट्टान जत्तिकै ठोस रहेको छ। सल्चेकमा आफ्नो पहिलो वर्षमा, उनले आफैंलाई धेरै उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ स्थापित गरे। हामीसँग एक भिडियो छ जुन उसलाई किन लेबल गरिएको थियो भनेर औचित्य साबित गर्दछ - युरोपमा उच्च-मूल्या rated्कन गरिएको युवा डिफेन्डर।
डिफेन्डरको बाल्यकाल कहानी र जीवनी लेख्ने समयको लागि छिटो अगाडि, उहाँ पछि इ England्ल्यान्ड आइपुगे लिभरपूलले loanण सम्झौता पूरा गर्‍यो उसको लागि। ओजानको असमर्थता पछि सामेल भए राई विलियम्स उनीहरूको शीर्ष रक्षकहरूलाई चोटपटक पछि रेडस डिफेन्स राहत गर्न।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... 'तिमी कहिल्यै एक्लो हिड्ने छैनौ'गीत ती चीजहरू मध्ये एक थियो जसले ओजनलाई यति उत्सुक र लिभरपूलमा सम्मिलित हुन कटिबद्ध बनायो। हामीले क्लबको साथ उसको अद्भुत पहिलो अन्तर्वार्ताको बेला पत्ता लगायौं। यहाँ हेर्नुहोस्।
निस्सन्देह, यो कदम ओजानका लागि सपना साकार भएको छ किनकि उनले रेड्सका लागि प्रदर्शन गर्ने छन जुन उनले बाल्यकालदेखि नै समर्थन गरे। हामीले यो पनि बुझेका थियौं Virgil van Dijk। कुनै पनि तरिकाबाट चीजहरू उनको लागि एन्फील्डमा बाहिर निस्के, बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हुनेछ।
ओजान काबाक डेटि Who को हो?
ओजान काबाकको केटी साथी छ?
विश्वको सब भन्दा रमाईलो लिगमा उनको स्थानान्तरण पछि, धेरैजना ओजवलको जीवनका महिलाहरू विशेष गरी उनकी प्रेमिकालाई चिन्न उत्सुक थिए।
यद्यपि यो देखिन्छ कि यो टर्कले (आफ्नो बायो लेख्ने समयमा) आफ्नी श्रीमतीको बारेमा कम कुरा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ - कम्तिमा अहिलेको लागि। उसले कुनै पनि महिलाको उल्लेख गरेको छैन र सम्भवतः अविवाहित रहन सक्छ, कम्तिमा आफ्नो लिभरपूल क्यारियरको शुरुको भागको लागि।
ओजान काबाक पारिवारिक जीवन:
यो कुनै गोप्य कुरा होइन कि उसले खेलको मैदानमा के गर्छ भनेर प्रशंसकहरूले उहाँलाई माया गर्छन्। यद्यपि त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जो केवल उहाँलाई अवस्थितको लागि बढी माया गर्छन्। यी काबाक परिवार हुन्। यहाँ, Lifebogger ले तपाईंलाई ओजान काबाकका आमाबुवाको बारेमा तथ्यहरू दिन्छ। हामी उसको भाइबहिनी र आफन्तहरूका बारे केही सत्य पनि बनाउँदछौं।
ओजान काबाक फादरको बारेमा:
उनका बुबाले टर्की जेलमा काम गर्नुभयो जहाँ उहाँ यति माथि उक्लनुभयो र जेल निर्देशक बन्नुभयो। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... ओजान काबाकका बुबा एक पटक फुटबलर थिए जसले खेलको शौकिया चरणहरू पास गर्न सक्दैनन्। आफूले चाहेको तहमा नपुग्दा, लोकप्रिय कारागार निर्देशकले उनका छोरालाई कबाक परिवारको सपनालाई निरन्तरता दिन समर्थन गरे।
ओजान काबाकका बुबालाई भेट्नुहोस्। उहाँ टर्कीमा प्रसिद्ध जेल निर्देशक हुनुहुन्छ।
त्यतिखेर ओजानलाई गलातसारायमा आफ्नो क्यारियर जारी राख्न गाह्रो थियो किनकि उनको बुबालाई उत्तर-पूर्वी टर्कीको टेकिरडाई शहरमा ट्रान्फर गरिएको थियो। यो मुख्य कारणहरू हो जुन उनले गलातसराय बस्ने अनुरोध गरे।
ओजान काबाक आमाको बारेमा:
उनी प्राय: 'धेरै सहयोगी' भनेर चिनिन्छिन। आफ्नो बुबाको टर्की जेलमा व्यस्त तालिकाको दौडान छोरालाई तालिम लिन ओजानको आमाले ठूलो भूमिका खेल्नुभयो। हेर्नुहोस सब भन्दा उत्तम तस्वीर हामी तीन जना गर्व आमाको पाउन सक्छौं।
ओजान काबाककी आमालाई भेट्नुहोस्। अझै पनि उनको उमेर मा सुन्दर।
अर्को नोटमा हामीले पत्ता लगायौं कि ओजान काबाककी आमा गृहिणी हुन्। उनले आफ्ना पतिलाई आफ्ना छोराछोरीलाई अनुशासन र शिक्षाको मूल्य बढाउन सहयोग गर्ने श्रेय लिएकी छिन्। अन्तमा, उनीले कबाकको खेलहरूमा भाग लिनु र कर्तव्यको केन्द्र बनाउँछिन् र उसलाई आवश्यक परेको बेला नैतिक समर्थन दिन्छ।
ओजान काबाक भाइको बारेमा:
उसको नाम Emre Kabak हो र ऊ ठ्याक्कै उसको ठूलो भाई ओजान जस्तो देखिन्छ। हाम्रो अनुसन्धानको नतीजामा यो छ कि Emre पनि फुटबलमा छ तर उसले आफ्नो सफलता हासिल गर्न सकेको छैन।
यो Emre (सही) हो। ऊ ओजान काबाक जस्तो देखिन्छ।
ओजान काबाकको बहिनीका बारेमा:
तिमी उनी कलिलो देखिन्छौ, सुन्दरताको यो प्याराग्ना कबाक परिवारको जेठी बहिनी र पहिलो जन्मेको बच्चा हो। उनले आफ्नो २० औं जन्मदिन समारोहको बखत आफ्नो भाइसँग यो फोटो लिइन्।
यो ओजान काबाकको बहिनी हो। उनी परिवारका जेठा छोरा हुन्।
ओजान काबाकका आफन्तहरूका बारे:
आफ्ना बाबुआमा र भाईबहिनीहरूबाट टाढा ओजवालको विस्तारित पारिवारिक जीवनको कुनै रेकर्ड छैन, खास गरी जब यो उनको बुवा र बुवा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ।
के तपाईंलाई उसको काका, काकीहरू चिन्छ? तपाईं हामीसँग जानकारीको त्यो टुक्रा साझा गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं। साथै, यो एक प्रकारका आदरणीय पाठकहरू हुनेछन् कि उसले आफ्नै भान्जा, भतिजा र भतिजाको बारेमा स्वयम्सेवाको जानकारी लिनेछ।
ओजान काबाक व्यक्तिगत जीवन:
केन्द्र फुटबल बाहिरको चरित्रको सामग्री वर्णन गर्न आउँदा खेलकूद लेखकहरूका शब्दहरू हुँदैनन्। ऊ मैदानमा र खेलको पिचबाट बाहिर को बीचमा वास्तवमै ठूलो भिन्नता छैन।
ओजानको भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समानुभूति, हास्य भावना, कामाराडी, नरम-बोली र कार्य आचार कुनै सीमा छैन। डिफेन्डर आफैंले बाहिर जाँदाको आनन्दलाई अस्वीकार गर्दैन जब उनीसँग मौका हुन्छ। साथै, उहाँ साथीहरूसँग धेरै पर्खनुभयो र परिवारसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुहुन्छ।
पछिल्लो तर कम्तिमा होइन, ओजान काबाक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले आफू कहाँबाट आएको हो बिर्सदैन। आफ्नो व्यस्त तालिकाको बावजुद, उसले अझै पनि सेटि visitमा जानको लागि समय भेट्टाउँदछ कि त्यसले उसलाई, सफल फुटबलर बनायो। यहाँ एक भिडियो छ कि उसको व्यक्तित्व वर्णन गर्दछ।
ओजान काबाक जीवनशैली - कार र नेट वर्थ:
ओजवालले आफूले सपना देखेकै जीवन बिताइसकेको छ भनेर बुझ्न तपाईंलाई कुनै चिठीको आवश्यकता पर्दैन। यो कथन हामीले बुझे पछि आए - यो कि उनको लिभरपूलमा उसको तलब २,०२,,2,025,916१। हो जुन उसले एफसी श्याल्केमा घर लिएको थियो।
विशाल पैसाले आफ्नो जेबमा जानको बावजुद, टर्की पेशेवर फुटबलर विदेशी कारहरू प्रयोग गर्न प्रतिरोधक नै रहन्छ। ओजानलाई यहाँ उसको एजेन्टको साथ चित्रित गरिएको छ जुन औसत कार जस्तो देखिन्छ जब उसले हप्ताको तुलनामा गर्छ।
अन्तत: उसको जीवनशैलीमा हामी हेर्दछौं कि कबाकसँग पहिले नै € करोड of० लाख डलर बराबरको नेटवर्थ छ यद्यपि उहाँ आफू धेरै जवान छ भन्ने तथ्यलाई विचार नगरौं। कुनै श doubt्का बिना, विदेशी कारहरूमा यात्रा गर्नु र महँगो घरहरू / अपार्टमेन्टहरूमा बस्नु स्टारलेटको मौलिक अधिकार हुनुपर्दछ।
ओजान काबाक बारे तथ्यहरू:
यस टुक्रालाई ओजवालको बाल्यकाल कहानी र जीवनीमा समेट्नको लागि, यहाँ उहाँबारे थोरै-ज्ञात वा अनटल्ड सत्यहरू छन्।
तथ्य # १ - स्पिटि Story कहानी:
सबै जना अब लावा बाहिर निकाल्ने, एक मुख बाट अर्को मा जबरजस्ती क्रोध को एक इशारा छ कि। यस कारणका लागि, हामी निष्कर्षमा भन्छौं - ओजान काबाक एक उत्तम फुटबलर होइन किनकि धेरैले उसलाई हेर्ने थिए।
डिफेन्डरले एकपटक यो विपक्षमा जबरजस्ती लाला आफ्नो विपक्षीलाई लार निकालेको कारण भयो। उनले त्यो गरे कि टोलीले खेल हराइरहेको देखी फ्याँक्न बाहिर। तलको भिडियो हेर्नुहोस्।
प्रति वर्ष:: € 2,025,916
प्रति महिना: € 168,826
प्रति हप्ता: € 38,900
प्रति दिन: € 5,557
प्रति घण्टा: € 232
प्रति मिनेट: € 4
प्रति सेकेन्ड: € 0.06
तपाईंले ओजान काबाकको हेर्न सुरु गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १ - फिफा २०२० रेटिंग्स:
रक्षक, ठीक साथी टर्क जस्तै, Cengiz Ünder, नाम मा राम्रो फिफा रेटिंग्स छ। २०२० मा ओजान मध्ये एक थियो फिफा २० मा सर्वश्रेष्ठ युवाहरू। २०२१ सम्म अगाडि बढि, उहाँ तपाईंलाई अझै राम्रो प्रतिज्ञाहरू हुनुहुन्छ तपाईंको क्यारियर मोडमा रक गर्नको लागि।
तथ्य # १ - ओजान काबाक धर्म:
के हामीले त्यो उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि कबाक आफ्नो देशभक्त जस्तै समर्पित मुस्लिम हो हाकान Çalhanoğlu? निस्सन्देह, टर्कीमा इस्लाम एक प्रमुख धर्म हो र रक्षक यस धर्मको पालना गर्ने एक हो।
तथ्य # १ - भ्यान Dijk को लागी प्रेम:
बाल्यावस्थादेखि नै ओजान लिभरपूललाई ​​माया गर्दै थिए। उनी स्टीभन जेरार्ड र सामी हिप्पियाको मनपरी प्रशंसा गर्दै हुर्किए। लिभरपूलमा सम्मिलित हुने सपना देख्नुभन्दा पहिले पनि ओजानले भर्जिलको भ्यान डिजक न। Shirt रेड्स शर्ट लिन संघर्ष गरे।
क्रिसमसको दिन, डिसेम्बर २th, २०१ O, ओजानले अन्ततः शर्ट एचआर सपना देख्यो। यो उनको मूर्ति भर्जिल भ्यान डिजक आफैले हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षर गरिएको भर्जिल शर्ट उहाँलाई पूर्व गलातासाराय टीमका साथी ओमर बायरमद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो - भान डिजकको बाल्यकालको मित्र।
उनले वीरगिलको हस्ताक्षर गरिएको शर्ट कसरी पछाडि कहानी साझा गर्दै, काबाकले एक पटक भने:
“मेरो साथी गलातासारायमा ओमर बायरम थियो। उहाँ हल्याण्डको भर्जिल भ्यान डिजकका लागि बाल्यकालको साथी हुनुहुन्छ - मेरो मूर्ति।
त्यसैले म उनीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ र मैले भर्जिन भ्यान डिजकको बारेमा केहि राम्रा भने। मैले उसलाई भने कि ऊ एकदम राम्रो छ र म उसलाई मेरो आइडलको रूपमा मन पराउँछु।
तुरुन्तै, ओमरले मलाई भन्यो कि भर्जिल उसको बाल्यकालको साथी थियो। म यो विश्वास गर्न सक्दिन त्यसपछि भोलिपल्ट उसले मलाई चकित पारे, फुटबलरको जर्सी ममा ल्याएर।
ओमरले भने कि उनले भर्जिनलाई मेरो बारेमा भने र डचले अटोग्राफ भन्दा बढी गरे। म धेरै खुसी थिए। मैले यो जर्सी मेरो परिवारको घरको भित्तामा हालेको छु। त्यो कथा छ!
हामी तपाईंलाई ओर्जिनमा भर्जिन भोज डिजकको अटोग्राफको स्पष्ट छवि देखाउन अगाडि बढ्यौं। तल देखाईएको छ, डच डिफेन्डरले हस्ताक्षर मात्र गरेन। उनी लेख्न पर्याप्त उदार थिए “ओजानलाई! शुभकामना!"
ओजान काबाकको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यो जानकारीमूलक अंश पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि टर्कीबाट प्रिमियर लिगको बीचमा फिर्ता केन्द्रको रोमांचक यात्राले तपाईंलाई सपनाहरू साँचो हो भनेर विश्वास गर्न प्रेरित गरेको छ।
सुरुबाट, कबाकको बाल्यकालको सपना लिभरपूलको लागि खेल्नु थियो - उही टोलीमा आफ्नो मूर्तिको साथ विशेषताको बारेमा कम कुराकानी गर्नुहोस्। यसले Lifebogger लाई डिफेन्डरका अभिभावकको उत्कृष्ट पालनपोषणको लागि प्रशंसा गर्दछ। वास्तवमा, तिनीहरूले वास्तवमै राम्रो काम गरे र अन्य फुटबल उत्पादहरूको आमाबाबुको उदाहरणको रूपमा सेवा गरे।
Lifebogger मा, हामी वितरणमा गर्व गर्छौं टर्की फुटबल खेलाडीहरू सटीकता र निष्पक्षताका साथ बाल्यकालका कथाहरू र जीवनी तथ्यहरू। यदि तपाईंले केहि पनि देख्नुहुन्न जुन ओजान काबाकको बायोमा सही देखिदैन, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्। उसको संस्मरण सारांश प्राप्त गर्न, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: ओजान मुहम्मद काबाक
जन्म मिति: मार्च २००० को नौौं दिन।
जन्मस्थान: अन्कारा, टर्की को राजधानी शहर।
अभिभावक: N / A
Siblings: Emre (कान्छो भाइ), एक जेठी बहिनी।
फिटमा उचाई: Fe फीट, In ईन्च।
सेमी मा उचाई: १186 सीएम।
खेल्ने स्थिति: केन्द्र पछाडि।
प्रेमिका / श्रीमती हुनु: N / A
बच्चाहरु: N / A
कुल मूल्य: M 5m।